China Candle jar Factory, Candle jar Supplier
Custom Logo Frosted foana miloko kaontenera Wide vava vera labozia siny ho an'ny fanaovana labozia
* LUXURIOUS & DECORATIVE: Ny zavakanto fanaovana labozia dia vao mainka nahaingo kokoa tamin'ny siny labozia foana;Misy siny labozia fitaratra ho an'ny fomba haingon-trano rehetra sy ny tsirony.
* RESISTANT HAFANA: Natao ho amin'ny faharetana fara-tampony ny siny vera hanaovana labozia vita amin'ny vera borosilicate izay tsy ho vaky amin'ny fiovan'ny hafanana tafahoatra toy ny vera mahazatra;Ny tsirairay amin'ireo siny fitaratra labozia dia mahatohitra hafanana, noho izany dia azonao atao ny mandrotsaka labozia mafana amin'ny fanaovana labozia tsy misy ahiahy amin'ny vaky na vaky.
* LID BAMBO AIRTIGHT: Ny fitoeran-daboziay dia tonga mitam-piadiana miaraka amin'ny saron'ny volotsangana vita amin'ny silikônina mba hiarovana amin'ny rivotra miditra; Ity tombo-kase ambony ity dia mihidy ao amin'ny fofon'ny savoka ary ny sarony hazo dia avo roa heny ho fitoeran-jiro - labozia tonga lafatra amin'ny siny misy sarony mba hiarovana sy asehoy amin'ny fomba tsara indrindra ny asa tananao.
* FIVAVAHANA MIARAKA HO AN'NY AROMA: Ireny siny lehibe hanaovana labozia ireny mba hametrahan'ny lahin-jiro amin'ny fomba mifanitsy amin'ny fikorianan'ny fofona, na dia mitsonika aza;Ny siny tsy misy na inona na inona atao amin'ny labozia dia hamela ny hanitry ny fofon'aina hanalefaka ny adin-tsaina mandritra ny andro ary hahatonga ny tranonao hanitry ny andriamanitra.
* PACKAGING TSY MISY: Nokarakarainay ny tsipiriany rehetra mba hahatongavan'ny siny vera misy sarony ho an'ny labozia ho anao ao anatin'ny toe-javatra madio, araka ny nokasaina.
Tsy misy afa-tsy Eco Friendly 6 oz 8 oz 10 oz Kaopy labozia fitaratra boribory misy sarony
* LUXURIE & DECORATIVE:Ny fahaizan'ny fanaovana siny labozia vita amin'ny labozia vita amin'ny vera dia vao mainka nandroso kokoa tamin'ny siny labozia tsy misy na inona na inona;Misy siny labozia fitaratra ho an'ny fomba haingon-trano rehetra sy ny tsirony.
* MATETIKA HAFANA:Natao ho amin'ny faharetana faratampony, ny siny fitaratra ho an'ny fanaovana labozia dia novolavolaina tamin'ny alalan'ny vera borosilicate izay tsy hikorontana amin'ny fiovan'ny hafanana tafahoatra toy ny vera mahazatra;Ny tsirairay amin'ireo siny labozia fitaratra dia mahatohitra hafanana, noho izany dia afaka manondraka savoka labozia mafana ianao amin'ny fanaovana labozia tsy misy ahiahy amin'ny vaky na vaky.
* SAROVY BAMBO TSY MISY rivotra:Ny fitoeran-daboziay dia tonga mitam-piadiana miaraka amin'ny saron'ny volotsangana vita amin'ny silikônina mba hiarovana amin'ny rivotra miditra; Ity famehezana ambony ity dia mihidy amin'ny fofon'ny savoka raha toa kosa ny sarony hazo iray ho toy ny fitoeran-jiro - labozia tonga lafatra amin'ny siny misy sarony mba hiarovana sy hampisehoana ny asa tananao amin'ny tsara indrindra. fomba mety.
* FIVAVAHANA MISY HO AN'NY AROMA:Ireo siny lehibe ho an'ny famolavolana labozia mba hametrahana ny labozia amin'ny fomba symmetrika ho an'ny fikorianan'ny fofona, ary ny fofona tsy miovaova;Ny siny tsy misy na inona na inona atao amin'ny labozia dia hamela ny hanitry ny fofon'aina hanalefaka ny adin-tsaina mandritra ny andro ary hahatonga ny tranonao hanitry ny andriamanitra.
* PACKAGING TSY MISY ATAO:Nokarakarainay ny tsipiriany rehetra mba hahatongavan'ny siny fitaratra misy sarony ho an'ny labozia ho any aminao ao anatin'ny toe-javatra madio, araka ny nokasaina.
Custom Aromatherapy Home Scented Green Candle Cup Glass Candles Gift Jars ho an'ny labozia ambongadiny
* LUXURIE & DECORATIVE:Vao mainka nahaingo kokoa ny asa fanaovana labozia miaraka amin'ireo siny labozia foana;Misy siny labozia fitaratra ho an'ny fomba haingon-trano rehetra sy ny tsirony.
* MATETIKA HAFANA:Natao ho amin'ny faharetana faratampony, ny siny fitaratra ho an'ny fanaovana labozia dia novolavolaina tamin'ny alalan'ny vera borosilicate izay tsy hikorontana amin'ny fiovan'ny hafanana tafahoatra toy ny vera mahazatra;Ny tsirairay amin'ireo siny fitaratra labozia dia mahatohitra hafanana, noho izany dia azonao atao ny mandrotsaka labozia mafana amin'ny fanaovana labozia tsy misy ahiahy amin'ny vaky na vaky.
* FIVAVAHANA MISY HO AN'NY AROMA:Ireny siny labozia ireny dia natao hametrahana ny lamosina amin'ny fomba symmetrika na dia mitsonika aza, ary mikoriana tsy tapaka;Ny siny labozia ho an'ny labozia dia hamela ny fofona mahafaly hanalefaka ny adin-tsaina mandritra ny andro ary hahatonga ny tranonao hanitry ny andriamanitra.
Ambongadiny Home Aromatherapy tsy misy labozia siny fitaratra ho an'ny fanaovana labozia
* LUXURIE & DECORATIVE:Vao mainka nihaingo kokoa tamin'ny siny labozia tsy misy na inona na inona ny zavakanto fanaovana siny labozia;Misy siny labozia fitaratra ho an'ny fomba haingon-trano rehetra sy ny tsirony.
* FIVAVAHANA MISY HO AN'NY AROMA:Ireo siny lehibe ho an'ny famolavolana labozia mba hametrahana ny labozia amin'ny fomba symmetrika ho an'ny fikorianan'ny fofona, ary ny fofona tsy miovaova;Ny siny laboziay dia hamela ny hanitra mahasambatra hanalefaka ny adin-tsaina mandritra ny andro ary hahatonga ny tranonao hanitry ny andriamanitra.
10oz Eco Friendly mihaja labozia mpihazona vera Foana labozia siny amin'ny boaty labozia fitoeran-javatra
* PACKAGING TSY MISY ATAO:Nokarakarainay ny tsipiriany rehetra mba hahatongavan'ny siny laboziay misy sarony ho an'ny labozia ho tonga aminao ao anatin'ny toe-javatra madio, araka ny nokasaina.
Ambongadiny an-trano Aromatherapy foana labozia siny fitaratra ho an'ny labozia fanaovana labozia siny ambongadiny
* PACKAGING TSY MISY ATAO:Nokarakarainay ny tsipiriany rehetra mba hahatongavan'ny siny laboziay misy sarony aminao ao anatin'ny toe-javatra madio, araka ny nokasaina.
Tavoahangy labozia miloko fitaratra Tealight fitoeran-dabozia mitentina betsaka ho an'ny Haingo fampakaram-bady sy haingon-trano
* SAROVY BAMBO TSY MISY rivotra:Ny siny labozia misy labozia dia misy saron'ny bamboo vita amin'ny silikônina mba hiarovana amin'ny rivotra miditra; Mihidy ao amin'ny fofon'ny savoka ity tombo-kase ambony ity ary ny sarony hazo dia mitambatra ho fitoeran-jiro - labozia tonga lafatra amin'ny siny misy sarony mba hiarovana sy hampisehoana ny asa tananao. amin'ny fomba tsara indrindra.
4 Inch Tall Glass Cylinder Siny andry labozia mitsingevana labozia ho an'ny Wedding Centerpieces labozia siny
* FIVAVAHANA MISY HO AN'NY AROMA:Ireo siny labozia fitaratra ho an'ny famolavolana labozia mba hametraka ny labozia symmetrically na dia mitsonika, ary tsy miovaova fofona mikoriana;Ny siny tsy misy na inona na inona atao amin'ny labozia dia hamela ny hanitry ny fofon'aina hanalefaka ny adin-tsaina mandritra ny andro ary hahatonga ny tranonao hanitry ny andriamanitra.
Vidiny mety tsara tavoara amber vera tsara indrindra misy sarony ho an'ny fanaovana labozia
1. TRULY AIRRTIGHT - vera borosilicate avo be tsofina vita tanana, saron'ny bosoa esorina miaraka amin'ny gasket famehezana silisiôma famehezana rivotra dia manitatra ny havaozina ao anatiny.
2. ORGANISE MORA NY PANTRY-ANAO - Ny haben'ny slim dia maka toerana kely eo amin'ny countertop na talantalana.Ny vera mazava dia mamela anao hahita izay ao anatin'ny siny tsirairay, izay manamora ny famantarana ny ao anatiny.
Ambongadiny tsara kalitao vera labozia foana siny labozia kely mahafinaritra kaopy misy fanampiana
Noho ny fanorenana mafy orina an'ireny fitoerana labozia ireny dia afaka miara-miasa amin'ny kitapo fanaovana labozia ianao sy ny famatsiana labozia mba hamenoana ireo fitoeran-jiro ireo amin'ny labozia tianao indrindra.Miara-miasa ihany koa amin'ny jiro dite tsy misy lelafo, labozia elektrika, ary labozia kely kely izay mety ho tafiditra ao anatin'ity fitoeran-jiro kaopy kely ity.Natao tamin'ny fampiasana vera faran'izay tsara indrindra mba tsy hanatsara ny bika aman'endriny fa mba hisorohana azy tsy ho mafana loatra na vaky.Ampiasaina ihany koa mba hampifangaro habe samihafa ho an'ny afovoany izay hanampy ny fikasihana tonga lafatra amin'ny lanonana fisakafoanana manaraka.
tavoahangy vera labiera, siny fitaratra ho an`ny ranom-boankazo, Tavoahangy Saosy Glass Bbq, zava-pisotro misy tavoahangy vera, tavoahangy diffuser volotara, tavoahangy ranom-boankazo,